Halatra fiara “minibus” narahina vonoan’olona: miaramila kaporaly iray no nitetika antsy ilay mpamily | NewsMada
Par Taratra sur 02/03/2021
Tsy vitan’ny notetitetehiny antsy fa mbola notondrahany asidra ihany koa avy eo ilay mpamily ilay fiara “minibus” nangalarin’ny jiolahy tany Toamasina ary hita tany Ambohimahasoa. Fantatra, araka ny famotorana mbola nitohy fa miaramila kaporaly am-perinasa iray no tena nahavita iznay habibiana izany
Mbola tsy mifarana hatreto ny fikarohana sy ny fanadihadiana momba ilay halatra fiara minibus “gris” niainga avy ao Toamasina ny 25 janoary 2021 ka hita tany Ambohimahasoa-Fianarantsoa ny mpamily raha toa ka nolokoina mena ilay fiara hita teto Antananarivo, ny 4 febroary lasa teo. Nandritra ny fanadihadiana natao teny anivon’ny borigadin’ny Zandarimariam-pirenena misahana ny ady heloka bevava sy ny fikarohana ao Toamasina, miaramila am-perinasa iray antsoina hoe Pirinatsara, monina ao amin’ny fokontany Analankininina, Toamasina, ny tompon’antoka amin’ny famonona. Kilasy voalohany ao amin’ny toby 1/RM3 izy ary manana solonanarana hoe Kaporaly izay nahavita nitetika antsy ny mpamily io. Mbola izy koa ny nanondraka asidra azy sy ny fihetsika tsy fampiseho masoandro rehetra nataony. Tsikaritry ny olona manodidina io fihetsika mahery vaika fanaon’io lehilahy io ka nahatonga ny fisamborana azy. Marihina fa niisa enina mianadahy izy ireo no indray voasambotra mahakasika ity vono olona ity.
Efa mpanakorontana fiarahamonina…
Vao tsy ela akory ny niantsoan’ny valilahiny polisy ity miaramila ity noho ny fihetsika mahery setra nataony taorian’ny fandraisany zava-mahadomelina. Nanakorontana ny mpiray monina aminy rehetra ao Amorokanaly-Analakininina amin’ny andro alina ny tenany. Maro ireo olona manodidina nanambara fa tsy mendrika ny ho mpitandro filaminana io Pirinitsara io. An-dalam-pikarohana ny mpiray tsikombakomba amin’ity miaramila nahavanon-doza ity ny zandary ao an-toerana amin’izao fotoana izao.
Sajo sy Tsiferana Randriatiana